Ukurekhodwa kwevidiyo efihlakeleyo (i-SPY222) | Izisombululo ze-OMG
I-OMG Mini efihliweyo yeRekhodi yevidiyo (SPY222)
Ukuqonda ukunyuswa kwesantya, ikhamera iya kuqalisa ukurekhoda ngokujonga into eshukumayo kwindawo ebanjiweyo.
Ukurekhoda kweLoop ifumanekile, oku kuthetha ukuba kusilela ekunikezeni ifayile endala kunye neyona intsha xa igcwele ikhadi le-SD.
Ibhetri ehlaziyiweyo ehlaziyiweyo yokugcina ixesha lokurekhoda kwiiyure ze-5, kwaye iyasebenza ngelixa kushaja kusetyenziswa umthombo wamandla wangaphandle.
Ncinci kwaye ifihlile ngokulula: Ijongeka ngathi yipeni xa uyifaka epokothweni yakho, akukho namnye owakha wabona ukuba yikhamera! Ihambelana kakuhle nesandla sakho, ipokotho, okanye ikhabethe kwaye incinci ngokwaneleyo ukuba ungazifihla naphi na
UKUPHATHA KWENKQUBO YOKUPHILA: Ikhamera yepokhethi ithatha iividiyo ezicacileyo kwi-1080P, ukongeza kwiividiyo ezinemibala ye-HD kunye nokucaciswa okukhulu ngexesha lasemini, le khamera yepenki yokuhlola iphinda irekhode kakuhle kwindawo emnyama, kunye nale nto enhle, unokufaka iinkcukacha ngakumbi ebusuku.
Ulawulo lweFowuni ekude: Uya kukwazi ukubukela ividiyo ehleliyo kwi-Intanethi kwifowuni yakho ngaphandle kwe-Intanethi
Ukugcinwa kwendawo: Ncedisa ikhadi le-Max 128GB MicroSD, inkxaso yokubukela kwi-intanethi.
Umbane wokubonelela: I-5V DC 1A
Battery umthamo: 1200mAH
Ixesha lokurekhoda ividiyo: iiyure 5
Ixesha lokurekhoda okuvakalayo: iiyure 20
Ubungakanani bomkhiqizo: 9.3cm * 2.8cm * 1.5cm
Isisindo somkhiqizo: 90g
SPY222 - I-Mini Hidden Video Recorder Footage
15825 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-2 Namhlanje